महोत्तरीमा म्याद सकिएको औषधि दिने अहेव पक्राउ परेको खवर सुन्दा दुख लाग्यो । यसरी म्याद सिद्दिएका औषधी बिरामीलाई दिएर नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्न पाइदैन । यस्तो काम गर्ने जोसुकैलाई कडा कारबाही हुनैपर्छ ।
दशैमा पिङ खेल्दा पालैपालो खेलिन्थ्यो । तोकिएको भन्दा धेर खेल्न खोजे तल हुनेहरुले पिङ रोकाउथे । ठ्याक्कै त्यस्तै हुदैछ संसदमा । नेताहरुलाई दशैं लाग्या छ ।
कस्तो विडम्बना एकले अर्कालाई दोष नलगाई त कोहि बोल्दैन । दुधले नुहाएको को नै छ र यहाँ ? सबैले आफ्नो गल्ती कमी कमजोरीलाई सुधारेर मिलेर जानुको विकल्प छैन । यदी त्यस्तो भएन भने दलहरु विरुद्ध सडकमा नारा जुलुस हुन बेर छैन ।
छ महिना सरकार मेरो, अनि छ महिना तेरो भन्ने सहमती पनि जनताको हितमा गरिएको सहमती हो कि सत्ता स्वार्थ ?
अब नेपालमा एकै पटक तीन जना प्रधानमन्त्री हुने नीति बनाऔं । तीन प्रधानमन्त्रीले छुट्टाछुट्टै रुपले काम गरुन् । एउटा टोलीलाई अनुगमन र अर्को टोलीलाई सल्लाहकार टोली बनाउँदा के होला ?
देशका विभिन्न ठाउँहरु बाढिपहिरोले खपी नसक्नु बनाइसक्यो कतिको ज्यान गयो ,कति घाइते त कति सबै चिज गुमाएर आश मार्दै त्रसित अवस्थामा दिन बिताइरहेका छन्, यता देशका जिम्मेवार पदमा बसेका नेतालाई कुर्र्सी तान्दा तान्दै ठीक्क छ । हैन कहिले चै हेर्ने हो ती भुकम्प पीडित र बाढी पीडित जनतालाई नेता ज्यु हो ?
एक करोड लगानिमा आम नागरिकले कसरी डाक्टरी पढने ? यो लगानि कसरी उठाउँछ त्यो डाक्टरले ? के गरिब विद्यार्र्थीको लागि डाक्टरी अध्ययन निषेधित हो ?
राजनीतिलाई लिएर फेसबुकमा टीका टिप्पणी नगरेकै बेस । सबैको संस्कार हेरेकै हो । कुन सरकारले के दियो भनेर सोध कर्णालीबासीलाई, बिहान के खाउँ बेलुका के खाउ हुनेहरूलाई ! त्यसैले जुन जोगि आएपनि कानै चिरे जस्तै हो ।
डाक्टर गोविन्द केसी र सरकार बिच विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि अनशन नै बस्नुपर्ने हो सरकार ?
​शान्त बहादुर थापा